Sili shishini elinobuchule eligxile ekwenzeni, ukuyila kunye nokuphuhlisa izixhobo zemoto. Kwi2004, U-Huawo waqala ukuveliswa kwezinto ze-TPO / TPE, iimethi zemoto, iitranki, iikhaphethi kunye ne-Car Sound Deadening Mat, ngenxa yokuba sinesebe lethu lokuvelisa kunye nemveliso.
Imethi yemoto ye-TPE / TPR ngowona mgangatho uphezulu kwimarike, i-Eco-friendly, i-Anti-slip, kwaye ibonelela ngayo yonke ukhuseleko lwemozulu, khusela imoto yakho ekungcoleni, eludakeni, kwityiwa, kwimvula nakwikhephu. Kwaye i-100% ilungile ngokwesiko kwimoto yakho, yenza ubomi bulula kwaye bucoceke.
Neminyaka eliqela uphuhliso ngesantya esiphezulu, siye wakha iimveliso zayo kunye nenkqubo yolawulo lomgangatho ogqibeleleyo kunye elebhu esemgangathweni. Ngoku sibonelela ngeemethi zemoto kunye neMoto yokuLungisa iMoto kwiVolkswagen kunye neToyota.